अब कांग्रेसको ने’तृत्वमा सरकार बन्छ,वर्षमान पुन (भिडियो सहित):: Mero Desh
अब कांग्रेसको ने’तृत्वमा सरकार बन्छ,वर्षमान पुन (भिडियो सहित)
Published on: २२ चैत्र २०७७, आईतवार ०८:२४
काठमाडौं,२२ चैत्र । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले अब छिट्टै वैकल्पिक सरकार नि’र्माण हुने विश्वास दिलाएका छन् । पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन आज÷भोलिभित्रै फिर्ता लिने पनि उनले जनाए । आज विहान नेपाली रेडियो ने’टवर्कबाट प्र’सारण भएको नेपाली बहस का’र्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा यदि राजनैतिक नै’तिकता भएको भए यतिवेलासम्म राजीनामा आईसक्ने थियो भन्ने भनाई पनि राखे । तर, प्रधानमन्त्रीमा नै’तिकता नभएकोले ओलीले राजीनामा नदिएको उनले टि’प्पणी गरे । लोकतन्त्रमा शासन गर्ने भनेको आफूसँग स्प’ष्ट बहुमत हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग अहिले जनमतपनि नभएको दाबी गरे । प्रमुख प्र’तिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने र यसको लागि अ’ग्रसर लिने भनेर नि’र्णय गरेको कुरा उल्लेख गर्दै नेता पुनले आफ्नो पार्टीले पनि स’मर्थन फिर्ता लिने सुनाए उनले प्रधानमन्त्री ओलीले जे बोल्ने हो त्यो नगर्ने र जे गर्ने हो !
त्यो कहिल्यै नबोल्ने गरेको पनि स्मरण गराए उनले भने हाँको वि’रुद्धमा बहुमत पुग्यो भने फेरि संसद् वि’घटन गर्ने उहाँको तयारी छ ! उहाँले हुँदाहुँदै एमालेलाई पनि मिलाउन सक्नुभएको छैन् । देशलाई निकास दिन्छु भनेर राजीनामा दिन्छु भनेर कुरा गरेको होईन । ReportersNepal